Ndenye Blog-imagination + Innovation | Martech Zone
Duane si Echiche efu + Innovation abụwo onye na-agụ nnukwu akwụkwọ na ọ bụ nke mbụ m blog-tippee ya mere aga m akwụghachi ya ụgwọ ụfọdụ nnukwu ndụmọdụ iji dozie blọọgụ ya (nke bụrịrị ọkwa kachasị elu!):
Ndị a bụ ndụmọdụ m maka blog gị:
Nchọgharị ọchụchọ na-ahụ n'anya ịkwado saịtị dị elu ma ọ bụrụ na aha saịtị ahụ dabara na ngalaba aha. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị mere m na saịtị ga-agaghị ọkwá n'elu maka "Marketing na Technology"… adabaghị "douglaskarr". Nwere ngalaba mara mma mana aha blọgụ dị iche. Ikekwe ị nwere ike itinye ụfọdụ “okike” na “traction” na obere isiokwu nke blọọgụ gị (ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịdebe aha blog).
Iji mee ka ndị mmadụ nọrọ, m ga-akwado ha Njikọ posts ngwa mgbakwunye ma tinye posts ndị yiri ya na ala nke ọ bụla n'ime posts gị. Zọ a ndị na-achọta gị site na Nchọgharị Nchọgharị ga-agụ post gị ma ọ bụrụ na ha ahụghị ihe ha chọrọ, ha nwere ike ịrapara maka isiokwu ndị ọzọ dị n'otu isiokwu. Nke a ga-enyekwa aka miri na ejikọ maka Nchọgharị Nchọgharị.
'Ve nwere di na nwunye RSS mkpọchi maka anya m. Ekwenyere m na ị nwere ike ịdọta ndị mmadụ na nri gị site na iji akara ngosi RSS oroma na akara aka nri kama akara ngosi acha anụnụ anụnụ. (M na-akwado iji FeedBurner iji tụọ ndepụta gị ma gbakwunye ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ, dị ka ndebanye aha email)
Ederede gị dị egwu, dị nkenke ma bụrụ nke e dere nke ọma. Nakwa, ị nwere ngọzi nke ibi n'otu n'ime obodo kachasị mma na mbara ala - Vancouver ka na-ewe # 1, agbanyeghị. Iji kwado ụdị edemede gị ma kwalite ụlọ gị, ọ ga-amasị m ịhụ ka ị ga-ahụ nnukwu onyonyo nke Toronto, ikekwe igwe na-ekwo ekwo n'abalị, ma tinye nke ahụ nwere isi okwu n'isi ebe nnukwu isi isi na-acha anụnụ anụnụ dị. Ọ ga-emetụta isiokwu gị. Ihe yiri ihe osise dị na Ihe Okike gị ga - adị mma - ọ na - enwe obi ụtọ, na - agba agba… ma na - egosi ụfọdụ ihe ahụ!
Fantastic Blog, Duane! Anyị nwere ọtụtụ ihe anyị ga-amụta site n'aka gị - yana agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ gị na mmekọrịta ọha na eze, ịre ahịa, na Physiology yana ọrụ gị ugbu a na ụlọ ọrụ mgbasa ozi gị. O doro anya na ị na-eme mkparịta ụka ahụ na ọkwa ọzọ!
Ntinye aka na ntinye aka: Aberrant Absurdity